Motostore: hisy ny “Tanamaniacs” | NewsMada
Motostore: hisy ny “Tanamaniacs”
Ny 29 sy 30 jona ho avy izao eny amin’ny CCI Ivato, hampanao fifaninanana tsy fahita fa voalohany eto Madagasikara ny Motostore. Fotoan-dehibe henjana amin’io fifaninanana io ny “Tanamaniacs”, fifaninanana intelo miantoana, fampisehoana teknika avo lenta, ao anatin’ny faritra mifefy. Fotoan-dehibe iray, ny “Championnat enduro Madagascar”, fifaninanana intelo miantoana ihany koa hanaovana “Test cross” amina faritra voatokana.
Tafiditra ao anatin’ny fiadiana ny tompondakan’i Madagasikara ny fitambaran’ireo fifaninanana enina ireo, ka hanao famaranana ny 10 tsara toerana indrindra. Tafiditra ao anatin’ny fandaharan’ny FMaM (Fédération malgache de motocyclisme) ny dingana vitan’ireo manao famaranana ireo. Fanafanàna andrana aloha ny hanokafana ny fotoana rehetra amin’ireo faritra roa hanaovana fifaninanana.
Hetsika iray lehibe hafa ny “motoclubs”, ny 30 jona, hahitana mpitondra moto miisa 150 manerana ny Nosy. Miaraka izy ireo samy hanao fampisehoana arahina fihetsika samihafa, hamonjy ny “Village moto clubs”. Ho hita amin’izany, ohatra, ny fifaninanana “cross traditionnelle”.
Ankoatra izay, mandritra io roa andro io, ny fisian’ireo tranoheva hahitana kojakoja sy fitaovana fampiasa amin’ireny moto ireny, varotra hifanaovana, fampisehoana sy kilalao samihafa, miampy toeram-pisakafoana. Anisan’ny mpiara-miombon’antoka ny Ultima média, misy ny gazety Taratra sy ny Les Nouvelles.